बैंकमा पैसा अभाव, गाडीको आयात मुख्य कारण ! — Arthatantra.com
Arthatantra.com > Headline > बैंकमा पैसा अभाव, गाडीको आयात मुख्य कारण !
काठमाडौं । गत वर्ष असोज दोस्रो सातादेखि सुरु भएको लगानीयोग्य पैसा अभाव यो वर्ष असोज लाग्दा नलाग्दै सुरु भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भदौमा उच्च स्तरमा कर्जा प्रवाह गरेपछि अहिले तरलता अभाव भएको बैंकरले बताएका छन ।
नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अनुसार गत भदौमा वाणिज्य बैंकको कर्जा ४२ अर्ब रुपैयाँ बढ्यो । यो अवधिमा निक्षेप भने पाँच अर्बमात्रै बढेको छ । असारयताको तथ्यांक हेर्दाे दुई महिनामा वाणिज्य बैंकमा निक्षेप १३ अर्ब घटेको छ भने कर्जा ४६ अर्ब रुपैयाँ बढेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बिहीबार मुलुकको वित्तीय प्रणालीमा ३२ अर्ब रुपैयाँमात्रै अधिक तरलता छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भुक्तानी सुरक्षाका लागि राख्नुपर्ने न्यूनतम रकमबाहेकको पैसालाई अधिक तरलता भन्ने गरिन्छ ।
यो पैसा लगानी गर्न सकिन्छ। तर यो रकम नेपाली वित्तीय प्रणालीको कुल निक्षेपको १ प्रतिशतभन्दा पनि कम हो । राष्ट्र बैंककै तथ्यांकअनुसार गएको असार मसान्तमै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ३२ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थियो।
निक्षेपको १ प्रतिशत मात्रै अधिक तरलता हुने अवस्थाले तरलता समस्या सुरु भएको देखाउँछ। लगानीयोग्य पैसाको अभाव चर्किँदै गएपछि केही दिनयता बैंकहरूबीच हुने अल्पकालीन कारोबारको ब्याजदर (अन्तरबैंक दर) ५ प्रतिशत पुगेको छ ।
निक्षेप घट्ने र कर्जा बढ्ने विरोधाभाषले बैंकलाई थप लगानी गर्न नसक्ने अवस्थातर्फ डोर्याइरहको बैंकर नै बताउँछन । यसरी पहिलो आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिनामै पैसाको अभाव चुलिनुमा गाडीको आयात मुख्य कारण हुनसक्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन ।
‘अहिलेसम्म समष्टिगत रूपमा कुन क्षेत्रमा कति पैसा लगानी भयो भन्ने तथ्यांक आइसकेको छैन’, राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा.गुणाकर भट्ट भन्छन, ‘तर त्यो पनि एउटा कारण चाहिँ हो ।’-अन्नपुर्णपोष्टबाट
२०७६ असोज ३ गते १२:२४ मा प्रकाशित
हिमालयन पावरको पहिलो सेयर कारोबार ३ सयसम्म गर्न पाइने
डेभलपमेण्ट बैङ्कको ५ लाख कित्ता सेयर खुल्यो तपाईले भर्नुभयो ?
धादिङको निलकण्ठ नगरपालिकाको वडा कार्यालयमा कसले गर्यो तोडफोड ?
जेठो सन्तान छोरा जन्मिए गाउँलेलाई खसी काटी खुवाउनुपर्ने